Fantatrao ve fa afaka manana DesdeLinux amin'ny mailakao ianao? | Avy amin'ny Linux
Araka ny voalazan'ny lohateny hoe: Fantatrao ve fa afaka manana DesdeLinux amin'ny mailakao ianao? 😉
Vitsy amintsika no mahita fa mahazo aina ny mamaky ny lahatsoratra FromLinux amin'ny alàlan'ny mailaka anay, na mamaky fotsiny ireo lahatsoratra eto amin'ilay tranonkala fa mitazona kopian'ny lahatsoratra tsirairay ao amin'ny mailaka anay. Izaho manokana dia hitako fa tena ilaina ny manana kopian'ny lahatsoratra tsirairay ao amin'ny mailako, ary raha ny tena fanatanterahana izany dia tsy sarotra mihitsy 😀
Betsaka no tsy maintsy nahatsikaritra efa ela, ny tiako holazaina dia ilay widget (boaty) ao amin'ny sisin-tsoratray (bara ankavanana) mamela antsika hisoratra anarana amin'ny bilaogy:
Teo no nametrahan'izy ireo ny mailany ary tsindrio ny bokotra Raiso amin ny, hahazo mailaka manana rohy midadasika ianao izay tsy maintsy tsindrio ary voila, ireo lahatsoratra manaraka avy amin'ny DesdeLinux dia ho tonga amin'ny mailakao.
Na izany na tsy izany, misaotra an'ireo izay efa nanara-dia anay tamin'ny alàlan'ny paositra sy ireo izay hanomboka hanaraka anay tsy ho ela 🙂
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Fantatrao ve fa afaka manana DesdeLinux amin'ny mailakao ianao?
Nandritra ny fotoana vitsivitsy dia nianatra lahatsoratra vaovao tamin'ny alàlan'ny mailaka aho. Ny zavatra tokana dia, noho ny antony sasany, nandefa azy ireo tamin'ny folder spam ny gmail, saingy heveriko fa efa namboariko izany.
Tsy maintsy natao izany satria nianiana ady tamin'i Google sy ny vokariny isika, ary izao mamaly faty antsika izy ireo… LOL !!
Izay no manazava ny zava-drehetra KZKG. Voafintina ao anaty tetika mifanohitra amin'ny FromLinux. Tsy noeritreretiko mihitsy hoe handeha lavitra ry zareo. XDDD
Ny Google dia mitsiriritra antsika ary matahotra antsika izy ireo ... ho hitanao fa tsy ho ela dia te-hividy anay an-tapitrisany izy ireo ... bastards ... LOL !!
Eny, hataoko mijaly kokoa izy ireo, ka ny vola natolotra dia stratospheric! XD
Raha fantatrao, efa ela aho no nandray azy ireo ary nohavaozin'ny olona aho
Misaotra anao nanaraka anay 🙂
Tsy tokony hanome hevitra betsaka aho fa mamaky ny bilaogy isan'andro, ny tena marina dia tsara ny ambaratonga.
Misaotra anao amin'ny fotoana mety !!
Misaotra anao 🙂
Efa ela no nampiasako an'ity rafitra ity ary tena ilaina izy io, atoro anao ... Izaho manokana, mahazo aina kokoa amiko io fa tsy mamaky lahatsoratra amin'ny RSS.
Raha te-hiditra bilaogy iray amin'ny maro ianao amin'izany fomba izany, tsara raha manana kaonty mailaka hampiasaina amin'io serivisy io ihany.
Raha ny tenako manokana dia milay kokoa amiko noho ny mamaky lahatsoratra amin'ny alàlan'ny RSS.
Eto akaiky eto izao. Mahazo aina kokoa noho ny RSS tsy misy na inona na inona.
Amin'ny lafiny iray, nisoratra anarana tamin'ny bilaogy mihoatra ny 100 aho, tsy azoko an-tsaina ny famakiana azy ireo amin'ny alàlan'ny mailaka na amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy satria maro no milaza fa "androany".
Hatramin'ny nahalalako ny bilaogy nosoratako tamin'ny alàlan'ny mailaka hatramin'ny nijereko ny vaovao tamin'ny findaiko Android ary hatreto tsy misy olana 😉
Bilaogy tena tsara, ilaina amin'ny mpampiasa Linux rehetra
Efa ela no nanarahako azy io, fa ny zavatra voalohany novakiako isan'andro
maniry hatrany ny KZKG .., Elav sy ny sisa
famihinana avy any Kiobà
Miarahaba anao avy any Cuba ihany koa, tsara ny fahalalana fa misy maro avy eto no mamaky antsika.
Raha ny marina dia voatery nisoratra anarana tamin'ny mailaka tamin'ny olona fantatro aho satria tsy manana fidirana amin'ny Internet izy ireo, izany no nahatonga ahy nanao an'ity lahatsoratra ity - - ^
"Amin'ny Debian" ao amin'ny mailako? nah
Rehefa tsy manana kaonty twitter aho dia mora ho ahy ny mamantatra amin'ny alàlan'ny mailaka na RSS, mpampita vaovao tiako indrindra.
Efa ela no nanarahako azy ireo tamin'ny mailaka.
Toy izao no namakiako azy tamin'ny findaiko.
Fa miditra amin'ny bilaogy foana aho rehefa eo alohan'ny PC.
Ary maninona ny ady amin'i Google? hehe ..
Tsy mahagaga raha mahita kely azy ireo ho an'ny G + aho
Raha hafahafa ny feony / ratsy tarehy, ahoana no hamaritako ny tenako? Ny tena marina dia manaraka ny bilaogy amin'ny alàlan'ny RSS sy mailaka aho, ary tsy mahazo aina ny mahazo an'io fampahalalana io indroa, ary, na manao ahoana na manao ahoana famakiako ilay lahatsoratra amin'ny alàlan'ny mailaka, dia mamafa ny mailaka foana aho ary miditra amin'ny bilaogy.
Rehefa mahazo lahatsoratra amin'ny alàlan'ny mailaka ianao dia misy zavatra mifandraika amin'ny fitantanana ny famandrihana tokony hiseho amin'ny faran'ny mailaka 😉
Tsara isan'andro !!
Tsy misy fisaorana hatramin'ny nanatevin-daharana ny vondrom-piarahamonina g + faobe ny boaty fampidirako XD !!, mbola misaotra ny fampitandremana